Mr Sunshine ( 2018 ) - Myanmar Asian TV
အရင်ဆုံး ဒီကားကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်တဲ့ ဒါရိုက်တာနဲ့ ဇာတ်ညွှန်းရေးသူတွေကို အရင် မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ Goblin နဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကပဲ Descendants of the Sun ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒါရိုက်တာ Lee Eung Bok
နဲ့ ဇာတ်ညွှန်းရေးသူ Kim Eun Sook နှစ်ယောက် ၂၀၁၈ Mr Sunshine ဆိုတဲ့ မျိုးချစ်စိတ် တော်လှန်ရေး အချစ်ဇာတ်လမ်းတွဲကို ထပ်ဖန်တီးထားပြန်ပါတယ်။
ဒီကားမှာတော့ အဓိက ဇာတ်ကောင်တွေ အဖြစ် ၉ နှစ်ကျော်ကြာ ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့ ဝေးကွာနေခဲ့တဲ့ Lee Byung Hun က Choi Yoo-jin ဆိုတဲ့ အဓိက ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဇာတ်ကောင်နေရာကနေ သရုပ်ဆောင်ထားတာကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသမီး နေရာကတော့ Kim Tae Ri က သရုပ်ဆောင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအညွှန်းလေးက ကိုရီးယား တိုင်းပြည်ရဲ့ အစေခံ မျိုးရိုးက ဆင်းသတ်လာခဲ့တဲ့ Mr Sunshine လေးက ကိုရီးယာကနေပြီး U.S ကို ဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ချိန်ချိန်မှာ ကိုရီးယား ကို သူက US ရဲ့ စစ်သား တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ ကိုရီးယား နိုင်ငံရဲ့ ကြီးမြတ်တဲ့ မျိုးနွယ်က မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို
အဲ့နောက်မှာ ကိုရီးယားက US ရဲ့ ကိုလိုနီလက်အောက်ခံ အဖြစ်ရောက်ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံရေး အရှုပ်အရှင်းအကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်….
အာရှရဲ့ တော်လှန်ရေးကားဆိုတာ မပါမဖြစ် ပါရတဲ့ နိုင်ငံ ရှိပါတယ်….
အဲ့တာကတော့ ဂျပန်ပါတယ် ဒီကားမှာလဲ ဂျပန်နိုင်ငံ အကြောင်းလဲ ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်….
ဘယ်လို အက်ရှင် ဇာတ်ကြမ်းတွေ လာမလဲ…
Lee Byung Hun ရဲ့ အက်ရှင်တွေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ကွက်တွေကို MMATV ပိရိသတ်ကြီး ကြည့်ရှု့ခံစားလိုက်ပါအုံး ခင်ဗျာ …
Translators : Htoo Aung , Thet Myat Noe Lwin & May Phyu Zin
Encoder : Min Theim Kyaw ( MTK )
Duration: 75 min min
Starring: Byun Yo-han, Kim Min-jung, Kim Tae-ri, Lee Byung-hun, Yoo Yeon-seok,
Trailer: Mr Sunshine ( 2018 )